आज असार २७ गते आईतवार , हेर्नेुहोस् आजको दिन । तपाईको कस्तो छ त ! आजको राशिफल - Chitwan Online Khabar
आज असार २७ गते आईतवार , हेर्नेुहोस् आजको दिन । तपाईको कस्तो छ त ! आजको राशिफल
२७ असार २०७८, आईतवार ०८:३६
मेष–कामबाट सजिलै फुर्सद पाइनेछ । मनमा प्रसन्नता मिल्ने दिन छ ।दिन मनोरञ्जनपूर्ण रहनेछ । व्यापार र रोजगारीका क्षेत्रमा लाभ मिल्नेछ । व्व्यापार तथा उद्योगतर्फ सामान्य फाइदाको योग छ।
वृष–व्यवसायमा थप लगानी बढाउन सकिनेछ । वैदेशिक कामकाजमा फाइदा होला । अप्रत्याशित लाभ हुनेछ । नयाँ कामका स्रोत फेला पर्लान ।धन मान पाउने योग छ । नोकरि तथा राजनितीमा आफनु बर्चस्व बढाउन सकिने छ ।
मिथुन–स्वास्थ्यको विशेष ख्याल गर्नु होला । धननाश हुने योग छ ।अनावस्यक झमेलामा परिएला । खानामा सावधान रहनु होला ।खर्च गर्दा होस पुर्याउनु होला । स्वास्थ्यका लागि खानपानमा सजग रहनुहोला ।
कर्कट–अन्नको काममा लाभ हुने दिन छ । साथै कसैबाट समर्थन पाउने दिन छ ।रमाइलो तरिकाले कामहरु गर्न पाइनेछ । पशुधन र जमिनबाट पनि सामान्य लाभ होला ।काम गर्न जाँगर चल्नेछ, उत्साहवर्द्धक समय छ, आम्दानी बढ्न सक्छ ।
सिंह–नसोचेको ठाउबाट धनलाभ भइ मन हर्षित हुने छ ।आफुले सोचेभन्दा बढी नै लाभ हन्छ । निर्माण तथा व्यवहारिक क्षेत्रमा मन लाग्नेछ । अचानक उपहार मिल्ने योेग छ । महत्वाकांक्षी योजना गोप्य राखेर अघि बढ्दा फाइदा हुनेछ ।
कन्या–लामो यात्राको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । साथी घरपरिवारबाट सुख शान्ती पाहिने छ । लामो यात्राको योग छ, साथै धनमाल कमाउने दिन छ ।कमाइ रामै्र संग हुनेछ । अप्ठ्यारा परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नुपर्दा मन खिन्न रहन सक्छ ।
तुला–व्यर्थको खर्चले मन पिरोल्ला । सोच्दै नसोचेको ठाउमा पैसा खर्च होला ।मनमा चिन्ता बढने योग छ । साथै धनमाल हराउन सक्छ । समय त्यति राम्रो छैन, गलत विचार बढने छ, समयमा सहि निर्णय गन सकिदैन
वृश्चिक–प्रिय जन संग को भेटले मन प्रफुल्ल रहला ।भाग्यले साथ दिनेछैन खर्च बढने लेन देनमा विबाद बढनेछ संयम भएर काम गर्नुहोला ।व्यवारिक चिन्ताले सताए पनि प्रयास गर्दा जटिल कार्यहरु पनि बन्नेछन् ।
धनु–बचत हुने प्रवल सम्भावना छ । नया कामका योजनाहरु बन्ने सम्भावना छ । व्यापारमा सफलता पाउनुहोला यात्रा गर्ने अवसर पनि मिलनेछ ।आज तपाइको खर्च भन्दा कमाइ नै बढी हुने योग छ ।
मकर–रमाइलो तरिकाले कामहरु गर्न पाइनेछ । पशुधन र जमिनबाट पनि सामान्य लाभ होला । अधुरा काम बन्ने योग छ । नोकरि तथा राजनितीमा सफल भइएला ।पैसो कमाउने योग छ । साथै पारिवारिक सुख मिल्ने दिन छ
कुम्भ–वादविवादको सामना गर्नु पर्नेछ । आजका योजना पूर्ण कार्यान्वयन नहुन सक्छन् ।परिश्रमले काममा रुचि बढने र आर्थिक क्षेत्रमा राम्रो प्रगति होला । कडा प्रायस गरे पनि सफलता हात लाग्ने बेलामा बादविवाद हुन सक्छ ।
मीन–स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले समेत यो राम्रो समय छ । आर्थिक लाभ हुनेछ ।व्यापारमा सफलता पाउने यात्रामा रमाउने र भेटघाटमा सहयोग पाउने योग छ ।केहीले सम्मान गर्नेछन् केहीले अनावस्यक डर देखाउने किसिमको मिश्रित समय छ